Mihainoa An’Andriamanitra—Bokikely Amin’ny Fiteny Maro Sady Feno Sary
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Batak (Toba) Bichlamar Chichewa Chitonga (Malawi) Chol Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Galicienne Galoà Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabyle Kambôdzianina Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kpelle Krio Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Myama Nahuatl (Afovoany) Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pendjabi Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Vezo Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Bokikely Amin’ny Fiteny Maro Sady Feno Sary
Mipetraka any Mongolia ny vehivavy iray antsoina hoe Odval. Tsy hainy tsara hoe firy taona izy, fa milaza izy hoe hoatran’ny teraka tamin’ny 1921. Mbola kely izy dia efa niompy ary herintaona fotsiny izy no nianatra tany an-tsekoly. Tsy mahay mamaky teny àry izy. Vao haingana anefa izay, dia nisy bokikely feno sary nanampy azy hahalala an’Andriamanitra sady nahalalany hoe misy zavatra tsara be amin’ny hoavy, ho an’izay mihaino an’Andriamanitra. Tena tiany ny zavatra nianarany.
Namoaka an’io bokikely io ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny 2011, ary misy karazany roa ilay izy. Samy feno sary tsara tarehy izy roa fa ny iray fotsiny tsy dia misy soratra firy.
Efa ho amin’ny fiteny 583 izao ilay feno soratra kokoa, izany hoe ilay Mihainoa An’Andriamanitra dia Hiaina Mandrakizay Ianao. Amin’ny fiteny 483 kosa ilay hoe Mihainoa An’Andriamanitra, izay vitsy soratra kokoa. Ampitahao amin’ny Fanambarana Iraisam-pirenena Momba ny Zon’olombelona ange izany e! Navoakan’ny Firenena Mikambana izy io ary voadika tamin’ny fiteny 413 tamin’ny Oktobra 2013. Raha atambatra koa ny isan’ny natao pirinty tamin’ireo bokikely roa ireo, dia efa ho 80 tapitrisa.
Faly erỳ ny ramatoa be taona iray tany Brezila nandray an’ilay bokikely Mihainoa An’Andriamanitra. Hoy izy: “Faly aho hoe mba misy mieritreritra ihany ny olona hoatr’anay. Tsy mbola nandray ny gazetinareo mihitsy aho satria tsy mahay mamaky teny. Fa ity bokikely ity tiako.”
Hoy i Brigitte, mipetraka any Frantsa ary tsy mahay mamaky teny: “Isan’andro aho mijery ny sary ao amin’ilay bokikely.”
Hoy ny Vavolombelon’i Jehovah iray any Afrika Atsimo: “Io no bokikely mora ampiasaina indrindra mba hanombohan-dresaka amin’ny Sinoa rehefa hampianatra ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly. Nitory tamin’ny olona teny amin’ny oniversite aho ary nitory tamin’ny olona zara raha mahay mamaky teny. Tsy misy antsasak’adiny akory dia vitako ny mampita hevitra fototra avy ao amin’ny Baiboly.”
Misy Vavolombelon’i Jehovah mampianatra mpivady nahita fianarana, any Alemaina. Tena tian’ilay rangahy ilay bokikely. Hoy izy: “Fa maninona no izao vao omenareo ahy ity bokikely ity? Nefa ity mihitsy no tena manampy ahy hahazo tsara ny tantara sy zavatra lazaina ao amin’ny Baiboly!”
Hoy ny vehivavy iray marenina any Aostralia: “Efa an-taonany maro aho no nipetraka tany amin’ny tranon-drelijiozy niaraka tamin’ny masera. Izaho no akaiky indrindra ny mpitondra fivavahana, nefa mbola tsy nisy tamin-dry zareo nampianatra ahy momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Ny sary ao amin’io bokikely io no nahazoako tsara ny tena dikan’ny Matio 6:10.”
Izao no nosoratan’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Kanada: “Maro amin’ny olona avy any Sierra Leone mipetraka atỳ no miaiky fa miezaka mafy mitory momba ny Baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah. Nahita an’ilay bokikely hoe Mihainoa An’Andriamanitra amin’ny teny krio mantsy izy ireo. Nisy niteny hoe: ‘Tena mikarakara ny olona ianareo, tsy hoatran’ny olon-kafa.’”